Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Myanmar Engineers Forum The Myanmar Environmental Forum • View topic - နားလှည့်ပါးရိုက်
by acmv » Sat Dec 28, 2013 4:39 pm
နားလှည့်ပါးရိုက် -------------- မြစ်ဆုံဒေသ၏ ရေ၀င်ရောက်မည့် ဧရိယာသည်.. စင်္ကာံပူနိုင်ငံထက်ကြီးမားသည်.၊ ကျေးရွာပေါင်းများစွာပါဝင်သည်...။
ထိုဧရိယာအတွင်းတွင်..ထူထပ်သောသစ်တောကြီးများ ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များ ၊ အဖိုးတန် သဘာဝရတနာများ၊ ချောင်းမြောင်းငယ်များ များစွာတည်ရှိသည်..၊ မြစ်ဆုံဒေသကို စတင်လုပ်ကိုင်နေကတည်းက. ထိုဒေသမှ သဘာဝ သယံဇာတများဖြစ်သော.. ကျွန်း ၊ ကျွန်းနက် ၊ သစ်မင်း ၊ အင်ကြင်းကျောက် အပါဝင် ရှားပါး သစ်ပင် ၊ တရိစ္ဆာန်အရေများအား.. တရုတ်တို့သည်..တတိတိနှင့် ထုတ်ယူခဲ့သည်..၊
ဒေသခံစစ်အာဏာပိုင်များအား လာဘ်ထိုးကာ.. ညစဉ် ညစဉ်ပင်...ကားအစီးရာနှင့်ချီ တရုတ်ပြည်သို့ ရှေ့ရှုထွက်ခွါခဲကြဖူးပါသည်.. စစ်အာဏာပိုင်များသည်...... တစ်ည စာ ဆက်ကြေးရရှိသော ငွေဆယ်သိန်းခန့်ကိုသာမက်မောနေသဖြင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်က တစ်ည ဒေါ်လာဆယ်သန်းဖို့ခန့် ပေးနေရသည်ကို...သတိမပြုမိခဲ့ကြ..၊
အလွန်ရှားပါးလှသည့်.. တပင်လုံး ကျောက်ဖြစ်နေသော...အင်ကြင်းကျောက်များ၊ ရှားပါးသစ်တောထွက် တိရစ္ဆာန်များ၊ အား တက်သုတ်ရိုက် သယ်ဆောင်ကြသည်.။ အရှင်မွေးနေ့ချင်းကြီး ရှားပါးသစ်ပင်များအား ညတွင်းချင်း ဆေးထိုးရွှေ့ပြောင်းသည်အထိ.. လုပ်ရက်ခဲ့ကြသဖြင့်..... ထို အဖိုးတန်အမွေအနှစ်များသည်.. ယူန်ပြည်နယ် အမျိုးသားဥယျာဉ်များ.၊ ပြတိုက်များနှင့် တရုတ်သူဌေးအိမ်များသို့ တစ်စ တစ်စ..ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပေတော့သည်..။
မြစ်ဆုံစာချုပ်ထဲတွင်.. ရေ၀င်ဧရိယာအတွင်းရှိ..သယံဇာတများအတွက်.. မည်သို့ စီမံရမည်ကို..ထည့်သွင်း.ရေးသားထားကြဟန်မတူချေ.. တော်တော် ပြေးသော..ချေးဘရိန်းများပင်ဖြစ်သည်..၊ ရှစ်လုံး ၊ ဇော်မင်း ၊ တရုတ်အစိုးရ နှင့် တရုတ်ခရိုနီများ ၏ ဧရာဝတီ နှင့် မြစ်ညာဒေသ ဖျက်ဆီးရေးဇာတ်လမ်းကြီးပေတည်း...၊ ဧရာဝတီမြစ်ကို မပိတ်ခင်မှာပင်... ကနဦးပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ တန်ဘိုးက ကြီးမားလေစွ..။
--------------------- ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အရောင်ပြောင်းအစိုးရသည် မြစ်ဆုံကို တိ ကနဲနေအာင် ( ပြတ်သားသည့်မျက်နှာပေးဖြင့်) ရပ်တန့်ပြခဲ့ပြီး... ပြည်သူပေးသောအမှတ်များကို ယူပြီး.. ပြည်သူ့ ထောက်ခံမှုကို လိမ်ယူခဲ့သည်..၊
တကယ်တော့ မြစ်ဆုံကို ခဏရပ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်.. အမှန်တော့...လုံးဝ...မပြတ်သားရဲခဲ့ပေ... အဲဒါကြောင့် တရုတ် CPI သည်.မြစ်ဆုံပြန်လုပ်ခွင့်ရရန် ကြိုးစားမြဲဖြစ်သည်..၊ စားတုန်းက စားထားကြပြီး..အခုမှ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေသူများကို.. CPI က....ဒီအတိုင်းကြည့်မနေတာတော့ သေချာပါသည်..။
ဖိအားမျိုးစုံပေးပါလိမ့်မည်..၊ တရုတ်က ကြိုတင်ပေးအပ်ထားခဲ့သော ငွေများ.၊ ပွဲခများမှာလည်း.၊ ယူသည့် လူများက ယူပြီး...ပြန်မပေးခဲ့ကြသောအခါ.. မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေသည်မှာ...မထူးဆန်းပါချေ..၊ ဘဘများနဲ့ ပတ်သက်သည့် ကိစ္စတိုင်းကို.. လက်ရှိ အုပ်ချုပ်သူများသည်...ပြတ်သားစွာ ဖြေရှင်းခဲ့မှု...တစ်ခုမျှ မရှိခဲ့ဖူးပါချေ...၊
တရုတ်စီမံကိန်းများပါဝင်လျှင် ပိုဆိုးသည်...။ သေချာလေ့လာလေ..တွေ့ရလေဖြစ်ပါသည်။ အသေအလဲ...ကြောက်ချေးပါနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်...၂၀၁၅ အမီ.. နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မှုအတွက်ရော.. နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးမှုအတွက်ရော.. နိုင်ငံရေး တိုက်ကွက်အနေနဲ့ရော... ဧရာဝတီကို....သူတို့ အသုံးချပါလိမ့်ဦးမည်..၊
ခြေဥဘက်ကို အာရုံကျနေမှာစိုးသဖြင့်.. မြစ်ဆုံကိစ္စကို ပြန်ဆွပေးပြီး.. ပြည်သူများ ပွဲဆူမှ...ထပ်မံရပ်တန့် ပြပြီး.. ၂၀၁၅ အမီ...အမှတ်တွေ ချူပြီး ရယူနိုင်သလို.. အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ... အတိုက်အခံများကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပါလေဦးမည်. လုပ်ပေါက်တွေက ရိုးနေပြီဖြစ်သည်..။ တကယ်ကို တာဝန်ယူပြတ်သားသောအစိုးရဖြစ်ပါက.. အခုအချိန်ဆို... တစ်ယောက်မျှတောင်ကျန်တော့မည်မဟုတ်ပေ...